Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica udibana noMmeli weRiphabhlikhi yaseDominican eJamaica
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica udibana noMmeli weRiphabhlikhi yaseDominican eJamaica
uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeRiphabhlikhi yaseDominican • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Ummeli weRiphabhlikhi yaseDominican eJamaica naseMphathiswa Wezokhenketho waseJamaica
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica, Hon. U-Edmund Bartlett, (ubonwe ekunene emfanekisweni) ubulisa uMmeli weRiphabhlikhi yaseDominican eJamaica, oHloniphekileyo u-Angie Martinez Tejera, kwintlanganiso ekhethekileyo kwii-ofisi zakhe ngo-Septemba 1, 2021.
Ezi nkokeli zimbini zixubushe ubudlelwane obuqhubekayo nobuzayo phakathi kweentlanga zabo ezi-2.
Ithuba lokuzisa inqwelomoya ethe ngqo phakathi kweJamaica kunye neRiphabhlikhi yaseDominican yayikwitafile.
Ukhenketho loMphathiswa waseJamaica luzibophelele ekuqinisekiseni ukuba icandelo lezokhenketho lenza elona galelo lipheleleyo.
Ngexesha lokudibana kwabo baxoxa ngokuqinisa ubudlelwane phakathi kweJamaica kunye neRiphabhlikhi yaseDominican kunye nokuba nako kokwazisa ngenqwelomoya ngqo phakathi kwala mazwe mabini.
I-Ofisi yezoKhenketho eJamaica kunye neearhente zayo zikwiinjongo zokuphucula kunye nokuguqula Imveliso yokhenketho yaseJamaica, Ngelixa kuqinisekiswa ukuba izibonelelo ezivela kwicandelo lokhenketho ziyonyuka kubo bonke abantu baseJamaica. Ukuza kuthi ga ngoku iphumeze imigaqo-nkqubo kunye nezicwangciso eziya kuthi zibonelele ngamandla kwezokhenketho njengenjini yokukhula koqoqosho lwaseJamaican. ICandelo loMphathiswa lisazimisele ekuqinisekiseni ukuba icandelo lezokhenketho lenza elona galelo lipheleleyo kuJamaica kuphuhliso lwezoqoqosho ngenxa yomvuzo omkhulu.
E Ukhenketho lwaseJamaica Icandelo loMphathiswa, bakhokele umrhumo wokuqinisa amakhonkco phakathi kwezokhenketho namanye amacandelo afana nezolimo, ukuvelisa, kunye nokuzonwabisa, kwaye ngokwenza njalo bakhuthaze wonke umntu waseJamaican ukuba adlale eyabo indima ekuphuculeni imveliso yezokhenketho yelizwe, ukugcina utyalo-mali, kunye nokuphucula nokwenza izinto ezahlukeneyo. Icandelo ukukhuthaza ukukhula kunye nokudalwa kwemisebenzi kwamanye amaJamaica. UMphathiswa ubona oku kubaluleke kakhulu ekusindeni nasekuphumeleleni kweJamaica kwaye uyenzile le nkqubo ngokusebenzisa indlela ebandakanyayo, eqhutywa ziiBhodi zeeNdawo, ngokubonisana ngokubanzi.
D. Donner uthi:
Oktobha 31, 2021 kwi-20: 29
azithandeki? bajongeka njengeqela lee-idiots ezibamba iingqiniba ngolo hlobo kwaye akukho namnye othintela usulelo lwentsholongwane ukuya kwelinye ngaphandle kweemaski kunye ne "photo opp" yazo.